ရဲဌာနဆီကို အကွိမျပေါငျး တဈထောငျကြျောဖုနျးဆကျပွီး ကွကျဥလိပျရောငျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့လို့ အဖမျးခံရတဲ့ အဖိုးအို – Myanmar
Huu Nguyen လို့ အမညျရတဲ့ အဖိုးအိုတဈဦးဟာ အရေးပျေါဌာနရဲ. ဖုနျးနံပါတျဖွဈတဲ့ ၉၁၁ ကို ဇူလိုငျလကတညျးက သူ့ရဲ. ကွကျဥလိပျတှဝေယျဖို့ အကွိမျပေါငျးတဈထောငျကြျော ဖုနျးဆကျပွီး ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ ။
၉၁၁ ဖကျက ဖုနျးကိုငျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ အဖိုးအိုက သူ့ရဲ. ကွကျဥလိပျတှကေို ဝယျပေးဖို့ ပွောဆိုကွောငျး တရားရုံးစဈခကျြတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ ။ သူက ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျနကေ့စပွီး ၉၁၁ နံပါတျကို အကွိမျပေါငျး ၁၁၇၁ ကွိမျ ဖုနျးချေါခဲ့တာပါ ။ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနေ့ တဈရကျတညျးမှာတငျသူက အကွိမျပေါငျး ၂၄၁ ကွိမျထိ ဖုနျးချေါခဲ့ပါတယျ။
ဒီနောကျမှာာတော့ အဖိုးအိုကို ရဲတှကေ Ridgeway နဲ. Winchester နားတဝိုကျက ဈေးဝယျစငျတာတှအေနီးမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီး ဖမျးဆီးခဲ့ကွပါတယျ ။ အဖိုးအိုဟာ အမှနျတကယျပဲ သူ့ရဲ. ကွကျဥလိပျတှကေို ရောငျးခဖြို့ ကွိုးစားတာလား အရေးပျေါ ဌာနကို နှောငျ့ယှကျဖို့ ဖုနျးချေါတာလားဆိုတာကတော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရသေးပါဘူး ။
ဒါပမေယျ့လညျး အရေးပျေါ ဌာနကို အခုလိုမြိုး အကွိမျကွိမျ ဖုနျးချေါနတောကတော့ အရေးပျေါဌာနရဲ. လုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျစရာရှိတာတှကေို နှောငျ့နှေးစတော အမှနျပဲမို့ အဖိုးအိုဟာ အရေးယူခံရဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ရဲဌာနဆီကို အကြိမ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ဖုန်းဆက်ပြီး ကြက်ဥလိပ်ရောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ အဖမ်းခံရတဲ့ အဖိုးအို
Huu Nguyen လို့ အမည်ရတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးဟာ အရေးပေါ်ဌာနရဲ. ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ ၉၁၁ ကို ဇူလိုင်လကတည်းက သူ့ရဲ. ကြက်ဥလိပ်တွေဝယ်ဖို့ အကြိမ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် ဖုန်းဆက်ပြီး ရောင်းချခဲ့ပါတယ် ။
၉၁၁ ဖက်က ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဖိုးအိုက သူ့ရဲ. ကြက်ဥလိပ်တွေကို ၀ယ်ပေးဖို့ ပြောဆိုကြောင်း တရားရုံးစစ်ချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။ သူက ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ကစပြီး ၉၁၁ နံပါတ်ကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၁၇၁ ကြိမ် ဖုန်းခေါ်ခဲ့တာပါ ။ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းမှာတင်သူက အကြိမ်ပေါင်း ၂၄၁ ကြိမ်ထိ ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာာတော့ အဖိုးအိုကို ရဲတွေက Ridgeway နဲ. Winchester နားတဝိုက်က ဈေးဝယ်စင်တာတွေအနီးမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ် ။ အဖိုးအိုဟာ အမှန်တကယ်ပဲ သူ့ရဲ. ကြက်ဥလိပ်တွေကို ရောင်းချဖို့ ကြိုးစားတာလား အရေးပေါ် ဌာနကို နှောင့်ယှက်ဖို့ ဖုန်းခေါ်တာလားဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး ။
ဒါပေမယ့်လည်း အရေးပေါ် ဌာနကို အခုလိုမျိုး အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းခေါ်နေတာကတော့ အရေးပေါ်ဌာနရဲ. လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်စရာရှိတာတွေကို နှောင့်နှေးစေတာ အမှန်ပဲမို့ အဖိုးအိုဟာ အရေးယူခံရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ ခွဖေဝါးတျောတှငျ ပါရှိသညျ့ “(၁၀၈) ကှကျစကျ လက်ခဏာတျောမြား” အကွောငျး…